Ny sasany amin'ireo fampiharana Podcast tsara indrindra ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ny sasany amin'ireo fampiharana podcast tsara indrindra ho an'ny iPhone
Carmen rodriguez | | Fampiharana iPhone
Ny podcast dia fomba iray hanohizana ny fampiasana ny radio nentim-paharazana fa amin'ny fangatahana. Mihaino izay tadiavinao ianao rehefa maniry fa tsy diso toko. Ny zavatra tsara indrindra dia ny tolotra malalaka misy, na ny fandaharana amin'ny radio matihanina, toy ny avy amin'ny podcasters amateurs.
Isan'andro dia misy ny rindranasa manampy anay ataovy voafehy ny podcast, izay, raha fanatika ianao dia hitanao fa tena ilaina izany. Noho io fivoarana io dia mendrika ny hatao kely hevitra an'ny rindranasa.
4 Pocket Mandroaka
Izany no Manolotra ny Apple hanomboka. Izy io dia efa napetraka mialoha amin'ny fitaovana vaovao ary mifanaraka amin'ny iOS 7. Ny fanombohana dia mety ilay fampiharana ilainao, azonao atao ny mitady podcast na fantsona manokana na mitodika any amin'ireo Top Charts ary mitady zavatra vaovao .
Mpandimby ny Podcasts izy io fa natolotr'ireo sy ho an'ny mpihaino podcast. Ny fampiharana dia manaraka ny filozofia iOS 7 miaraka amin'ny fijery minimalista, saingy manome hevitra vaovao sy fiasa mandroso mihoatra ny famoronana an'i Apple ihany koa.
Mandefa a sidebar sidina miaraka amin'ny hitsin-dàlana amin'ny menus samihafa sy ny maheno fihainoana. Anisan'izany ny tsy lalaovina, lisitry ny fizarana izay mbola tsy nohenoinao, izay fanafarana vaovao, ary filaharana filalaovana ho an'ireo fizarana tianao hohenoina manaraka.
Na dia ny endriny sy ny interface aza Tena mitovy amin'ny Podcast izy io, ny takelaka sy ny traikefan'ny mpampiasa dia tsy mitovy mihitsy. Ho fanombohana dia mamela anao misintona sy mihaino podcast mivantana amin'ny iPhone izy, fa tsy mila mampifangaro azy amin'ny iTunes.
Mampiasà a lohahevitra maizina ho an'ny mpilalao, laharam-pahamehana ny naoty podcast mihoatra ny fisehony. Tsara homarihina ihany koa ireo bokotra efatra hitsambikina eo an-tampon'ny mpilalao, izay mamela anao handeha 15-30 segondra ao aoriana ary 30 segondra na 2 minitra mialoha.
Ny endriny dia mitovy amin'ny mpamaky Flipboard, manolotra a mozika velona na amin'ny lahatahiry na amin'ny tranomboky anao manokana. Ny menio ambony dia manome fidirana haingana amin'ny famandrihana anao, fizarana tsy milalao ary filahatra fampidinana.
Izy io dia interface tsotra sy intuitive izay manamora ny fitsambikinana haingana eo anelanelan'ny menus. Ho an'ny famandrihana tsirairay, ny fizarana vaovao dia azo alamina alefa ho azy ary koa raha te hanomboka amin'ny toerana eo anelanelany ianao, tonga lafatra raha tsy tianao ny fidiran'ny podcast.
Fanatanjahan-tena amin'ny minimalism izy io. ny tsy fisian'ny sokajy sy lisitra ny fahombiazana dia nandiso fanantenana, fa ny Mahafinaritra ny estetika ary ny sarimiaina mamolavola dia manao an'ity fampiharana ity ho tian'ny mpidoroka podcast izay maniry fatratra ny endrika.
Ny interface indrindra dia mizara ho takelaka roa, podcast ary fizarana, miaraka amin'ny fampandrenesana fisoratana anarana vaovao sy fisintomana vita mipoitra avy eo an-tampon'ny efijery. tolotra safidy vitsivitsy hanamboarana hafainganana amin'ny playback sy fampidinana mandeha ho azy isaky ny seho.
iCatcher! mifantoka amin'ny fanomezana endri-javatra mandroso sy safidy namboarina. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny fanavaozana tsirairay, ary koa ireo tambajotra WiFi nahazo alalana hisintona fizarana vaovao ary na hiseho na tsia ireo sary eo amin'ny efijery hidin-trano. ny habetsaky ny fikirana mahavariana
iCatcher! Mpilalao podcast€ 3,49
Ny fampiharana dia manohana maromaro fihetsika maro-mikasika izay mifehy ny fizarana ankehitriny sy ny filaharana filalaovana. Izy io dia iray amin'ireo fampiharana mandroso kokoa ao amin'ilay lisitra, saingy ny aingam-panahiny tsy manome aingam-panahy hividy azy.
Ny endriny dia tsotra, miaraka amin'ny safidy vitsivitsy ihany eo amin'ny efijery an-trano, alaina, tsy henoina ary ireo fizarana rehetra, izay aseho miaraka amin'ny sary famantarana sy famaritana kely. Ny bokotra hametraka eo amin'ny zorony ambony havanana dia mamela anao hikaroka sy hahita podcast vaovao. Popular mampiseho izay henoin'ny olon-kafa, fa ny Sokajy asehoy andiana podcast mifandraika amin'ny lohahevitra na fialamboly manokana.
Pod Wrangler - Moraina ny Podcast.maimaim-poana
Raha te-hisoratra amin'ny podcast mihoatra ny dimy ianao, esory ny doka tsindraindray ary ampandehana ny fampandrenesana fanosehana, mila kaonty RSS Wrangler ianao na manavao amin'ny alàlan'ny fividianana fampiharana vidiny 1,79 euro.
Ny SoundCloud dia manarona endrika audio isan-karazany, ao anatin'izany ny mozika, horonantsary fanadihadiana ary audiobooks. Manamora ny fisian'ireo podcast ihany koa ilay sehatra ka izany no anisany ao amin'ny lisitray. Ny lafy ratsy dia efa saika tsy afaka mahita podcast vaovao Raha tsy hoe efa fantatrao ny anarany na ampiasainao ny sehatra Internet hikarohana azy ireo.
SoundCloud - Mozika & Podcastsmaimaim-poana
Raha vao manaraka ny podcast ianao dia hiseho ho azy ireo fizarana vaovao. Ny misongadina dia ny rafitra fanehoan-kevitra, azonao atao ny manisy marika ny hevitrao a kaody manokana, Ka ny mpihaino hafa (sy ny mpamorona ny podcast) dia mahalala izay tianao horesahina. Endri-javatra tsara io raha tianao ho azo antoka ny fizotran'ny fifanakalozan-kevitry ny mpihaino anao, na manondro olana ara-teknika.
Ary inona no anaovanao? Iza no tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny sasany amin'ireo fampiharana podcast tsara indrindra ho an'ny iPhone
Tsy haiko hoe maninona ianao no mametraka lisitra misy safidy maro hafa ary navelanao ilay iray izay tsy isalasalana fa IVOOX tsara indrindra
Trakoneta dia hoy izy:
Miombon-kevitra aminao aho, manao ny lisitry ny fampiharana podcast izy ireo ary manadino ny tsara indrindra ary koa maimaim-poana, izany hoe ivoox
Mamaly an'i Trakoneta
ivoox dia serivisy iray izay ho an'ny podcasters dia toerana fitehirizana ary ho an'ny mpihaino toerana famandrihana dia mihoatra ny mpilalao podcast fotsiny ny maha-sehatra podcast sy fitantanana RSS RSS an-tserasera azy.
Noho io antony io dia tsy tafiditra izy io, ankoatry ny tsy maha-ankapobeny azy toy ny sasany.
Misy rindranasa mifandrindra amin'ny famandrihako iTunes ve?
Podcast no tsotra indrindra ary rehefa ampifanarahana dia hanontany anao raha te hanana ny famandrihana amin'ny iPhone-nao.
Carmenn dia hoy izy:
IVOOX no tavela satria avy amin'i Carmen ny lahatsoratra.
Valiny tamin'i Carmenn
Aza atao ankapobeny, izaho, amin'ny maha mpanoratra ahy, dia namela ivoox tany ivelany satria tsy mieritreritra ny hanana toetra mampiavaka ny hafa ary noho izany dia tsy azo ampitahaina izany.
Misy fanontaniana hafa ve? Misy fampidirana mahasoa? ...
Jou dia hoy izy:
Inona no dikan'izany fa mila mirindra amin'ny iTunes izy ??? Tsy natsofoko tao anaty solosaina nandritra ny taonjato maro ny findaiko. Tsy azoko ny tombony ambany, azonao hazavainao amiko ve izany? MISAOTRA
Mamaly an'i Jou
Dieselo dia hoy izy:
Efa nanandrana Markercast ve ianao?
Valiny tamin'i Dieselo
Ilay ampiasako amin'ny poscad-ko dia ivoox, izay nihatsara be ilay kinova vaovao mandra-pahatongany manana radio. oroka kely
Raha ny tokony ho izy, lahatsoratra Carmen tena tsara: *
Ahoana ny fomba Jailbreak iOS 7.0.6 amin'ny dingana tsirairay amin'ny Evasi0n
Rohy rehetra hampidinana ny iOS 7.0.6